Numeri 3 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
3 Zvino izvi ndizvo zvaiva zvizvarwa zvaAroni naMosesi pazuva iro Jehovha akataura naMosesi muGomo reSinai.+ 2 Aya ndiwo aiva mazita evanakomana vaAroni: Nadhabhi dangwe racho naAbhihu,+ Eriyezari+ naItamari.+ 3 Aya ndiwo aiva mazita evanakomana vaAroni, vapristi vakazodzwa vakanga vapiwa simba kuti vave vapristi.+ 4 Asi Nadhabhi naAbhihu vakafira pamberi paJehovha pavakauya nomoto usingabvumirwi nomutemo+ pamberi paJehovha murenje reSinai; uye havana kumbova nevanakomana. Asi Eriyezari+ naItamari+ vakaramba vari vapristi pamwe chete nababa vavo Aroni. 5 Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 6 “Swededza dzinza raRevhi+ pedyo, uvamise pamberi pomupristi Aroni, vamushumire.+ 7 Vanofanira kuchengeta zvavanosungirwa kuti vamuitire nezvavanosungirwa kuti vaitire ungano yose pamberi petende rokusanganira pakuita basa repatebhenekeri. 8 Vanofanira kutarisira midziyo yose+ yetende rokusanganira, uyewo zvinosungirwa vanakomana vaIsraeri kuti vaite pakuita basa repatebhenekeri.+ 9 Unofanira kupa vaRevhi kuna Aroni nevanakomana vake. Ndivo vakapiwa, vaakapiwa vachibva pavanakomana vaIsraeri.+ 10 Unofanira kugadza Aroni nevanakomana vake, ngavaite upristi hwavo;+ uye mumwe munhuwo zvake anoswedera pedyo anofanira kuurayiwa.”+ 11 Zvino Jehovha akaramba achitaura naMosesi, achiti: 12 “Tarira! Ini ndinotora vaRevhi pakati pevanakomana vaIsraeri panzvimbo pematangwe ose+ anozarura chibereko chevanakomana vaIsraeri; uye vaRevhi vanofanira kuva vangu. 13 Nokuti matangwe ose ndeangu.+ Pazuva randakauraya matangwe ose munyika yeIjipiti+ ndakazvitsaurira matangwe ose pakati paIsraeri kubvira kuvanhu kusvikira kumhuka.+ Iwo anofanira kuva angu. Ndini Jehovha.” 14 Jehovha akataurazve naMosesi murenje reSinai,+ achiti: 15 “Nyora vanakomana vaRevhi maererano neimba yemadzibaba avo, maererano nemhuri dzavo. Unofanira kunyora vanhurume vose vanobvira pamwedzi mumwe chete zvichikwira.”+ 16 Zvino Mosesi akatanga kuvanyora sezvakarayirwa naJehovha, sezvaakanga arayirwa chaizvo. 17 Ava ndivo vaiva vanakomana vaRevhi+ maererano nemazita avo: Geshoni naKohati naMerari.+ 18 Zvino aya ndiwo aiva mazita evanakomana vaGeshoni maererano nemhuri dzavo: Ribhini naShimei.+ 19 Vanakomana vaKohati+ maererano nemhuri dzavo vaiva Amramu naIzihari,+ Hebroni naUzieri. 20 Vanakomana vaMerari+ maererano nemhuri dzavo vaiva Mari+ naMushi.+ Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevaRevhi maererano neimba yemadzibaba avo. 21 KwaGeshoni kwaiva nemhuri yevaRibhini+ nemhuri yevaShimei.+ Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevaGeshoni. 22 Vakanyorwa vavo vaiva vanhurume vose vakaverengwa vaibvira pamwedzi mumwe chete zvichikwira.+ Vakanyorwa vavo vaiva zviuru zvinomwe nemazana mashanu.+ 23 Mhuri dzevaGeshoni dzaiva shure kwetebhenekeri.+ Dzakanga dzakadzika musasa nechokumavirira. 24 Jinda reimba yemadzibaba yevaGeshoni raiva Eriyasafi mwanakomana waRaeri. 25 Vanakomana vaGeshoni vaisungirwa+ kuti vatarisire zvaiva mutende rokusanganira zvaiti, tebhenekeri netende+ racho, chokufukidzisa+ chayo nechinhu chinovhara+ pasuo retende rokusanganira, 26 nejira rairembera+ rechivanze nechinhu chinovhara+ chesuo rechivanze chaiva kumativi ose etebhenekeri neatari, netambo dzayo dzetende,+ izvo zvose zvaiva nechokuita nebasa rayo. 27 Zvino kwaKohati kwaiva nemhuri yevaAmramu nemhuri yevaIzihari nemhuri yevaHebroni nemhuri yevaUzieri. Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevaKohati.+ 28 Pavanhurume vose vakaverengwa vaibvira pamwedzi mumwe chete zvichikwira paiva nezviuru zvisere nemazana matanhatu, vaisungirwa kuti vatarisire nzvimbo tsvene.+ 29 Mhuri dzevanakomana vaKohati dzakanga dzakadzika musasa kurutivi rwetebhenekeri, kumaodzanyemba.+ 30 Jinda reimba yemadzibaba remhuri dzevaKohati raiva Erizafani mwanakomana waUzieri.+ 31 Vaisungirwa+ kuti vatarisire Areka+ netafura+ nechigadziko chemarambi+ neatari+ nemidziyo+ yomunzvimbo tsvene yavaishumira nayo, nechinhu chinovhara,+ nebasa racho rose. 32 Jinda remachinda evaRevhi raiva Eriyezari+ mwanakomana womupristi Aroni, aiva mukuru wevaya vaitarisira zvavaisungirwa kuti vaite munzvimbo tsvene. 33 KwaMerari kwaiva nemhuri yevaMari+ nemhuri yevaMushi.+ Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzaMerari.+ 34 Vakanyorwa vavo maererano nokuwanda kwevanhurume vose vaibvira pamwedzi mumwe chete zvichikwira vaiva zviuru zvitanhatu nemazana maviri.+ 35 Jinda reimba yemadzibaba emhuri dzaMerari raiva Zurieri mwanakomana waAbhihairi. Vakanga vakadzika musasa kurutivi rwetebhenekeri nechokuchamhembe.+ 36 Vanakomana vaMerari vaisungirwa kuti vatarisire mapuranga emadziro+ etebhenekeri nembariro+ dzayo nembiru+ dzayo nezvigadziko zvayo nemidziyo+ yayo yose nebasa rayo rose,+ 37 nembiru+ dzechivanze dzaiva kumativi ose nezvigadziko+ zvadzo nehoko dzazvo dzetende netambo dzadzo dzetende. 38 Zvino vaya vaidzika musasa pamberi petebhenekeri nechokumabvazuva, pamberi petende rokusanganira nechokunobuda zuva, vaiva Mosesi naAroni nevanakomana vake, vaya vaitarisira zvaifanira kuitwa munzvimbo tsvene,+ sezvavaisungirwa kuti vaitire vanakomana vaIsraeri. Mumwe munhuwo zvake aiswedera pedyo aiurayiwa.+ 39 Vose vakanyorwa vevaRevhi vakanga vanyorwa naMosesi naAroni varayirwa naJehovha maererano nemhuri dzavo, vanhurume vose vaibvira pamwedzi mumwe chete zvichikwira, vaiva zviuru makumi maviri nezviviri. 40 Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Nyora matangwe ose evanhurume evanakomana vaIsraeri vanobvira pamwedzi mumwe chete zvichikwira,+ uye uverenge mazita avo. 41 Unofanira kutora vaRevhi nokuda kwangu—ndini Jehovha—panzvimbo pematangwe ose pakati pevanakomana vaIsraeri,+ nezvipfuwo zvevaRevhi panzvimbo pematangwe ose ari pakati pezvipfuwo zvevanakomana vaIsraeri.”+ 42 Mosesi akanyora matangwe ose aiva pakati pevanakomana vaIsraeri, sezvaakanga arayirwa naJehovha. 43 Matangwe evanhurume ose maererano nokuverengwa kwemazita avo kubvira pamwedzi mumwe chete zvichikwira evakanyorwa vavo akava zviuru makumi maviri nezviviri nemazana maviri nemakumi manomwe nevatatu. 44 Zvino Jehovha akaramba achitaura naMosesi, achiti: 45 “Tora vaRevhi panzvimbo pematangwe ose ari pakati pevanakomana vaIsraeri, nezvipfuwo zvevaRevhi panzvimbo pezvipfuwo zvavo; uye vaRevhi vanofanira kuva vangu.+ Ndini Jehovha. 46 Zvino somutengo wokudzikinura+ vane mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu pamatangwe evanakomana vaIsraeri, vakawandisa kupfuura vaRevhi,+ 47 unofanira kutora mashekeri mashanu nokuda kwomumwe nomumwe.+ Unofanira kuatora achienzanirana neshekeri renzvimbo tsvene. Shekeri rimwe chete rinokwana magera makumi maviri.+ 48 Unofanira kupa Aroni nevanakomana vake mari yacho kuti ive mutengo wokudzikinura vaya vakawandisa pane vanodiwa.” 49 Naizvozvo Mosesi akatora mari yomutengo worudzikinuro kune vaya vakanga vakawandisa pamutengo wokudzikinura wevaRevhi. 50 Akatora mari yacho kumatangwe evanakomana vaIsraeri, mashekeri chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi matanhatu nemashanu, achienzanirana neshekeri renzvimbo tsvene. 51 Mosesi akabva apa Aroni nevanakomana vake mari yomutengo wokudzikinura maererano nomurayiro waJehovha, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.